General Conditions ny Sale - Rikoooo
General Conditions ny fivarotana ny Rikoooo.com
Ity tranonkala www.Rikoooo.com dia ny tany momba ny tena-mpiantoka Bender Erik (izay voambara antsoina hoe Rikoooo), izay voasoratra anarana ao amin'ny birao dia 107 chemin, seranan-tsambo de seranana, 31410 Noé, voasoratra anarana tamin'ny varotra sy ny Companies Register ambanin'ny Siret isa 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. Ny tanjon 'ny ankapobeny ireo teny sy ny toe-javatra ny amidy dia ny hamaritra ny fepetra sy ny fepetra izay eo Rikoooo varotra sy ny mpanjifa no namarana ao amin'ny tranonkala ity. Ny fankatoavana ny kisary manampy ny nividy hahafantatra ny sy ny manaraka ny toe-piainana ankehitriny amin'ny fivarotana ankapobeny dia anisan'ny hentitra no tsy miovaova sy raikitra fanekena ho azy amin'ny rehetra ny fepetra hita ao amin'ny toe-piainana ankapobeny ny fivarotana.
Article 1 - Zava-kendreny sy ny votoatiny
1.1- ireo toe-piainana ankapobeny ny fivarotana haharesy ny antontan-taratasy hafa ny mpividy, ary indrindra amin'ny ankapobeny misy fepetra ny fividianana, raha tsy mazava sy manambany aloha fifanarahana izay namanay.
1.2 - Ireo toe-piainana ankapobeny ny amidy mihatra amin'ny fivarotana ny vokatra rehetra avy amin'ny orinasa amin'ny vohikalany manokana raha tsy fifanarahana mialoha ny lamina nanaiky an-tsoratra eo amin'ny antoko.
1.3 - Ny antontan-taratasy hafa noho ireo fepetra ankapobeny ny fivarotana sy indrindra katalaogy, prospectuses, dokam-barotra, manamarika, ihany manoro, tsy fifanarahana. Ny sary sy ny sary aseho ao amin'ny vohikala ihany no manoro sy tsy anjara ny andraikitry ny mpivarotra.
Andininy rehetra, fanehoan-kevitra, fanoharana ary ny sary volen'ny amin'ny toerana www.Rikoooo.com dia natokana ary ny fananan'ny Rikoooo irery ihany, na ny mpamatsy ary niaro eo ambanin'ny zon'ny mpamorona sy ny fananana ara-tsaina ho an'izao tontolo izao sy ny fikasana, modely, Patents, planina sy amin'ny ankapobeny antontan-taratasy rehetra, na inona na inona namonjy na nirahin'i Rikoooo ho any amin'ny mpanjifa dia ny fananana manokana ny Rikoooo na ny mpamatsy.
Article 3 - Filaharana
3.1 - Products nanolotra amidy amin'ny Rikoooo dia izay aseho amin'ny www.Rikoooo.com ary izay manan-danja ireo toetra voalaza eto. Araka ny andininy faha L. 111-1 ny Consumer Code, izay milaza fa "matihanina rehetra izay mivarotra fananana na asa dia, mialoha ny famaranana ny fifanekena, mametraka ny mpanjifa eo amin'ny toerana ny mahafantatra ny toetra manan-danja ny entana na tolotra ", ny orinasa Rikoooo manome fahafahana ny mpanjifa, talohan'ny mba misy fametrahana, mba mangataka fanazavana fanampiny momba ireo vokatra an-telefaonina, na amin'ny alalan'ny mailaka, amin'ny isa, ao amin'ny sasin ireo toe-javatra ankapobeny ny fivarotana.
Rikoooo dia manaiky ny hanome ny mpanjifa amin'ny misy fampahalalana fanampiny mba te mba hahazoana raha tsy mandinika ny tenany ampy nampahafantatra ny famaritana sy ny mampiavaka ny entana namidy teo amin'ny toerana voalaza etsy ambony.
Na izany aza, dia ny andraikitry ny mpanjifa mba hanamarinana fa nandidy ny vokatra mifanitsy ny zavatra ilainy sy ny toerana halehany, ny mpanjifa fotsiny ho tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ny vokatra ho amin'ny fampiasana ho an'ny izay no natao.
3.2 - Automatic firaketana rafitra no heverina ho porofo ny natiora, afa-po sy ny daty ny filaminana. Rikoooo manamafy ny fanekena ny mba ho any amin'ny mpanjifa ao amin'ny e-mail izay dia efa ampitaina. Ny fivarotana dia ho namarana ihany aorian'ny fanamafisana ny filaminana.
Rikoooo tahirin-ny zo mba hanafoana rehetra avy amin'ny mpanjifa izay misy fifandirana mikasika ny fandoavana ny filaminana teo aloha. Ny vaovao ny voalazan 'ilay nividy, rehefa nandray baiko, manao ny mpanjifa: raha misy ny fahadisoana eo amin'ny mpandray ny adiresy antsipiriany, ny mpivarotra tsy azo atao tompon'andraikitra ny tanteraka velively izany ny nanafaka ny vokatra.
3.3 - Rikoooo dia manana zo hanao fanovana na fanatsarana fa heveriny ilaina amin'ny fotoana rehetra ny ny vokatra, nefa tsy izany, satria efa nohamarinina noho ny mpanjifa, nety ny fanekena sy tahiry ny zo Tamin'ny fotoana ny famafana iray amin'ireo entana niseho tamin'ny amin'ny vohikalany, famafana izany dia tsy afaka atao tsy ho raharahanao manamarina ny ampahany ny mpanjifa, misy fahavoazana izay. Raha misy entana dia mba ho voafafa, ary ny mpanjifa tsy te hifidy mitovy iray hafa na mitovy vokatra, ny mba ho foanana ipso jure sy ny fandoavam-bola natao ho nahaloa.
Ny vokatra Rikoooo fanatitra dia hita ao amin'ny fari-ny misy boloky hazo sy ny vokatra tsy voatahiry ao Rikoooo ny hevi, manaiky ny fisian'ny ny mpamatsy, izay any an-dafin'ny ny fanaraha-maso ny Rikoooo. Raha ny unavailability ny vokatra rehefa avy nametraka ny lamin, Rikoooo dia manaiky ny mampahafantatra ny mpanjifa raha vao araka izay azo atao, tamin'ny alalan'ny paositra, Internet na e-mail. Ny mpanjifa dia afaka manafoana ny filaminana sy Rikoooo dia refund ho azy, raha vao araka izay azo atao, na vola fa mety ho nanangona avy amin'ny mpanjifa.
Izay mety ho unavailability ny vokatra, fa na inona na inona antony, dia afaka tsy raharaha hahatonga ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny Rikoooo sasany fahasimbana sy ny tombontsoa na ny fandaniana ny natiora misy na inona na inona.
Article 4 - fiterahana
Ny fanaterana ny intangible pananana atao avy hatrany aorian'ny fankatoavana ny fandoavam-bola.
Ny fivarotana vola vidin'ny vokatra ireo dia efa raikitra ny tariff manan-kery amin'ny andro ny fametrahana ny lamina. Rikoooo tahirin-ny zo manova ny vidin-javatra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny raharaha ny miovaova toy vidin-javatra, ny vidin-javatra azo ampiharina ho an'ireo vokany eo amin'ny daty ny fandraisana ny filaminana.
Ny vidin-javatra sy ny vidin-javatra voatanisa ao amin'ny www.rikoooo.com no voalaza tao amin'ny Euro sy ahitana VAT. Izy ireo harato ny misy fihenam-bidy sy ny manavaka fanaterana na ny saram-pandefasana.
Ny fandoavana ny vokatra baiko eo amin'ny toerana www.rikoooo.com atao vola amin'ny Paypal mba avy na 2Checkout (CB) na Hamarino.
6.2 - Non-fandoavana / fihazonana ny lohateny fepetra
Ny zava-nitranga ny fandoavam-bola dia manome alalana Rikoooo mba hampiato ny famonoana ho faty ny rehetra miavaka baiko ny mpanjifa, tsy misy ny farany ho afaka hitaky misy fahasimbana na indemnities ny na inona na inona. Ankoatra izany, ny mpividy dia manonitra Rikoooo vola lany rehetra nanameloka ao amin'ny fampahiratana amin'ny handraisam-bola ny vola, anisan'izany ny vongan vola onitra ny 10% ny vola noho, tsy misy fitsarana an-tendrony ny hafa fahasimbana sy ny tombontsoa.
Rehefa lafo ny entana dia tsy mandray karama ao amin'ny fotoana feno ny lahateny, Rikoooo tahirin-ny fananana mandra-feno ny fototra fandoavana ny vidiny sy ny mifanaraka Accessories, fandoavam-bola ao anatin'ny ny hevitry ny fepetra io ho azon'ny Price ny famoriam-bola amin'ny Rikoooo. Raha ny toerana misy anao 8 andro taorian'ny taratasy filazana ofisialy nalefan'ny taratasy voasoratra amin'ny fahalalana ny fandraisana sy nahomby, ny fivarotana dia ho foanana toy ny zo, raha toa Rikoooo tsara tsy misy fitsarana an-tendrony ny hafa fahasimbana sy tombontsoa.
Article 7 - antoky ny toa sy miafina kilema
Rikoooo manome antoka fa ny vokatra manaraka ny Frantsay sy Eoropeana fitsipika manan-kery momba azy ireo, araka izay misy.
Article 8 - nominativa vaovao
Rikoooo dia manaiky tsy mba hifandraisana amin'ny antoko fahatelo ny fanazavana azo avy ho azy avy amin'ny mpanjifa, izay tsiambaratelo. Ity dia vaovao ihany no ampiasaina amin'ny Rikoooo anaty tolotra ho fandraisana ny mpanjifa ny filaminana. Araka ny Data ny fiarovana Act ny 6 Janoary 1978, ny mpanjifa dia manana zo amin'ny fahafahana miditra, rectification sy ny fanoherana ny tahirin-kevitra momba azy manokana. Mba hanaovana izany, dia ampy ny mampihatra amin'ny aterineto, na amin'ny alalan'ny taratasy, mametraka ny anarany, anarana voalohany, adiresy ary, raha azo atao, ny mpanjifa boky.
Rikoooo dia mety ho afaka ny rehetra na ny ampahany amin'ny adidy nefa tsy afaka milaza izay fahavoazana avy izany eo amin'ny zava-nitranga ny toe-javatra na ny hery unforeseeable majeure fisorohana na fanemorana ny fampahavitrihana ny vokatra na ny sasany ny singa.
Raha maharitra ny hetsika mihoatra noho ny telo-polo andro manomboka amin'ny vaninandro ny fisehoan-javatra, ny fifanarahana ny fivarotana vita amin'ny ny orinasa sy ny mpanjifa dia mety ho faranana araka ny tena mazoto anjara, tsy misy ny antoko afaka milaza fahavoazana. Izany fanafoanana dia haka vokany eo amin'ny daty voalohany fanolorana ny taratasy voasoratra anarana tamin'ny AR miampanga ny hoe fifanekena ny fivarotana.
Article 10 - miadidy
Amin'ny alalan'ny fifanarahana mazava eo ny antoko, ny Commercial Fitsarana ny foibe dia ho tompon'andraikitra fotsiny misy disadisa na na inona na inona fitsarana mifandray amin'ny fananganana, famonoana na ny fandikana ireo fepetra ankapobeny ny fivarotana sy ny asa rehetra Sales ny Rikoooo vokatra. Ireo toe-piainana ankapobeny ny fivarotana sy ny varotra atao amin'ny Rikoooo dia manaiky ny lalàna frantsay.
Article 11 - Fanafoanana
Ny zava-misy fa ny orinasa tsy, na oviana na nanome fotoana, hahazo ny tenany ny zanaky ny fepetra hitranga amin'izany, dia tsy afaka waive ny zo miantehitra fepetra ireo amin'ny daty iray tatỳ aoriana.